China Yakakwira simba YC Capacitor kutanga mota fekitori uye vagadziri | Gogogo
Y matatu chikamu asynchronous Magetsi mota
YVF2 akateedzana frequency kutendeuka kumhanya akakosha matatu ...
Yakanakisa Kutenderera Pump
Yakakwira simba YC Capacitor kutanga mota
YC akateedzana ari ega-chikamu capacitor-kutanga mota, ndeyayo asynchronous mota. ine chete kutanga ma capacitors. Iwo ekutanga ma capacitors anotora chikamu mukutanga kana mota yatanga.
Mushure mekunge mota yatangwa, iyo yekutanga capacitor inodamburwa neiyo centrifugal switch uye haitore chikamu mune mota oparesheni.
Aya Magetsi emagetsi anonyanya kushandiswa mumhepo compressor, pombi yemvura, firiji, muchina wekuwachisa, michina yekurapa, michina yekuveza, zvigadzirwa zvekurima zvakasiyana siyana.Chigadzirwa chinotora IC0144 kutonhora nzira.Inogona kumhanya kwenguva yakareba.
Iyo imwechete chikamu mota inogona kunge iri yakakandwa simbi kana aruminiyamu dzimba.Muzvino musika wepasi rose, vatengi vekuEurope neAmerica vanosarudza kuoneka kudiki uye kwakanaka kwealuminium mota motors, nepo vamwe vatengi muAsia, Africa neMiddle East vachikanda simbi dzimba dzemotori. , nekuti mhenyu dzimba dzesimbi dzakasimba uye dzinogara kwenguva refu.Asi mashandiro emamota ane akasiyana dzimba anofanana.
YC DZAKATEVEDZANA CAPACITOR KUTANGA
Furemu nhamba: 71 ~ 132 simba: 0.37kw ~ 7.5kw Kakawanda: 50hz / 60hz
Kushanda system: S1 Insulation kirasi: B / E / F / H Rated Volt: 110v, 220v, 240v 115 / 230v
Inoshanda kune: semhepo compressors, mafiriji, zvekushandisa zvekurapa uye zvimwe zvemagetsi magetsi
Zvichemo: hombe yekutanga torque, yakanakisa kuita kuimba, kuponesa kwesimba, chimiro chakavimbika, kuita kwakawanda. Iwo akakosha akateedzana emota akayera simba ye220V / 50Hz, zvinoenderana nekudikanwa kwekupa 110V / 220V, 110V, 240V, 60Hz uye mamwe mota, inogona kukandwa aluminium chassis kana kukanda simbi chassis.
muenzaniso simba Rated ikozvino Inotenderera kumhanya kubudirira Simba chinhu Danga torque
Rated torque Danga razvino
Chitarisiko uye kuisa kukura
Furemu nhamba 安装 尺寸 Zviyero
Pashure: DZS / DZR
Zvadaro: MS Aluminium furemu B3 / B14 / B5 Flange Yakakwira mota
1 Hp mota Imwe Pasika
10hp Imwe Pasika Phase mota
3hp Imwe Pasika Chikamu Chikamu
7.5 Hp Imwe Chikamu Chikamu mota
Chikamu Chete 3hp Compressor mota
SPA Aluminium Muviri Wakachena Mvura Inodzika Pombi ...
Yakachipa Dc Solar Mvura Pombi
YB3 mhando yemagetsi mota YB3 yakanyanya kushanda ...
IZDB Imwe Chikamu Chete Kuzvipira Primer Vortex Mhuri ...